Sida loo qaabeeyo Foom Google ах та WordPress
Waxaa jira waxyaabo badan oo aad u badan oo ku saabsan WordPress. Шлях фудудахай у ла-іштікмаало, білаш ах, лайдхійо, ваксаана тагеерсан беель вейн о маральба дияар у ах інай каавіяйський білоуга хоре.
Sidii aad u isticmaashay wakhti dheer isticmaala WordPress, waxaan ku faraxsanahay ugudbinta macaamiishooyin ku dhejinaya mashaariicdayda. Noocyada ugu wanaagsan ee software waxay ii oggolaadeen inaan dhisno xirfad-raadin, si buuxda u shaqeynaya, iyo boggaga internet-ka ah ee dadka isticmaala iyaga oo aan baran codsiga ballaaran.
Марка ай тимаадо isticmaalka, середина ка середини ах qalabka угу muhiimsan ee aad u baahan tahay в арсеналі WordPress aad tahay foomka dhise. Waxay u ogolaaneysaa dhagaystayaashaada inay dhexgalaan astaantaada – waxay noqonayaan qaabka su’aalaha guud, codsiyada taageero, ama jawaab celinta. Foomamka waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa baaritaanno kaa caawinaya inaad fahamto qoto dheer oo aad u aragto dhagaystayaashaada.
Inkasta oo kaydka rasmiga ah ee rasmiga ah ee hore loo soo bandhigay fiilooyinka qaab-dhisida, qaar ka mid ah bloggers iyo suuqyeyaal ayaa doorbidaya inay ku dhuftaan G Suite – mareegta daruuriga ah ae ee webhaters.
Опублікуйте це, Waxaan ku tusi doonaa hababka kala duwan ee isticmaalka Foomamka Google oo leh boggaga WordPress.
1 Abuuritaanka Foomamka Google
2 У режимі Foomka Google ee WordPress
3 Isticmaalka wpGForm
Abuuritaanka Foomamka Google
Перш за все, галаанська форма Google Google iyadoo la isticmaalayo koontada Google ee sax ах.
"Ka bilow foomka cusub," dooro haddii aad rabto inaad ka bilowdo xoqdo ama aad isticmaasho template horay u jirey.
Dabcan, adigoo adeegsanaya шаблон waa wakhti badbaadiye ах, gaar ahaan haddii aad horay u ogtahay waxa aad isku deyeyso inaad ku buuxiso foomkaaga. Laakiin si ay u muujiyaan muuqaalada qaababka Google ах, aynu hore u soconno oo ka bilowno шаблон пустий.
Taab ahaan, tafatiraha foomka aasaasiga ах waxaa ka середина ах "xulasho badan" nooc su’aal ах. Tani waxay faa’iido u leedahay abuurista foomamka sahanka. Hadaad rabto inaad wax kale isticmaasho, dhagsii ‘Dhowr xulasho’ liiska hoos udhaca si aad u muujisid xulashooyinkaaga.
Xilligan, Foomamka Google waxay taageeraan noocyada su’aalaha soo socda si loo ururiyo macluumaad kala duwan.
Si aad wax uga beddesho macluumaad kasta, kaliya guji beerta madhan oo qor. Віск вальба аяа lagu badbaadin doonaa daruuraha, sidaa daraadeed uma baahna in laga walwalo badbaadinta.
Waxaad adeegsan kartaa su’aalo badan oo aad jeceshahay hal qaab. Si tan loo sameeyo, dhagsii badhanka ‘Kudar su’aasha’ qeybta dul sabaynaysa.
Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa sidebar si aad ugu darto walxo kale oo foomka ах, sida muuqaal, muuqaal, ama qayb gooni ах.
Sida caadiga ах suulka, kaliya weydii macluumaadka aad u baahan tahay dadka isticmaala bartilmaameedka. Хадді аад путдіісо су’аало аад у фарабадан ама нокотаба, дадка істикмаала ваксаа лага яабаа в лагу дхіррігелійо інай дхамайстіраан суо гудбінтоода.
Навчайте віск бадан оо ку ку saabsan shaqooyinka Foomka Google, tixraac Gue Learning Center adoo gujinaya посилання на це.
У режимі Foomka Google ee WordPress
Був оо аад такаано сиді лоо істікмаало Foomamka Google, waa waqti aad ku barato sida loo hirgeliyo boggaaga WordPress. Habka ugu sahlan waa inaad ku dhejisaa koodhka codka tooska ах ee boostada ama bogga.
Si aad u hesho koodhka koodhka ee foomkaaga, dhagsii batoonka ‘dir’ badhanka kore ee midig ee tifaftiraha.
Riix calaamadaha calaamadaha laba-laab leh (<>) si aad u muujisid koodhka codka.
Markaad nuqul ka qaadato, u gudub dashboardkaaga WordPress una fur bogga ama boostada meesha aad rabto in foomka la arko. Ви використовуєте код HTML-kaaga.
Xusuusnow, haddii aad ku dhejiso lambarka xargaha adigoo adeegsanaya tifaftiraha muuqaalka, koodhkaagu wuxuu u muuqan doonaa sidii hore. Adeegsiga tifatiraha qoraalka ayaa u sheegaya WordPress inay ubaahantahay inay marto khad gaar ah sida koodh. Markii la dhammeeyo, dhagsii batoonka ‘Dulmarka’ si aad u aragto haddii koodhku shaqeynayey.
Хадді-кале, ваксаад і теж ах ах угу рогі картаа тифафтір муукал ай си лоо еего хаддіі фомку си сакс ах у муукдо.
Aragga muuqaalkaaga wuxuu kuxirmaa seddex waxyaalood: mawduuca aad hadda ku leedahay WordPress, cabbirada aad sameysey markii aad sameysey koodh daboolan, iyo doorbidida midabkaaga midabada ee Google Forms.
Іска фірісо в mawduuca WordPress uu qeexayo ballaarinta mawduucaaga mawduucaaga. Waxaad ku bedeli kartaa tan iyada oo la adeegsanayo код ama adigoo ku xiraya mawduuc kale. Mawduucyada qaarkood, aaladda maadada waxay sidoo kale xajistaa ballac buuxa haddii aad joojinayso widget-yada dhinacyada.
Палітра midabbada, dhinaca kale, waxaa lagu beddeli karaa adigoo gujinaya batoonka ‘Midabada Palette’ ee tifaftiraha foomamka Google. Hadaad rabto, waad sawiri kartaa sawirro halkii aad u isticmaali lahayd midabyo asal ahaan asal ahaan ах.
Ku darida Foomamka Google iyada oo la adeegsanayo nuqullo codsanaya ayaa u muuqata mid sahlan oo aan loo baahneyn in la isticmaalo qalabyada, sax?
Хадді хадафкаагу калія ягай в лагу дхаджіо Фоомамка Google сіад болгаага WordPress у шешо, jawaabta waa haa. Si kastaba ha ahaatee, wpGForm badanaa wuu ka badan yahay oo kaliya isdhexgalka foomamka. Waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad ku qariso magaca foomka, bedelka badhanka gudbinta, isticmaalka jaahwareerka, iyo wixii la mid ah.
Laakiin ka hor inta kale, xasuuso in wpGForm kaliya ay la shaqeeyaan qaabka hore ee qaababka Google.
Si aad u gasho tan, dhagsii badhanka ‘Caawinta & Jawaab celinta ‘oo dooro’ Ku noqo foomamka hore. ‘
Ви можете ознайомитись із програмою wpGForm, щоб позначити dashboardkaaga WordPress oo guji “Google Форми”> ‘Ku dar Foomka Google ee Cusub.’
Marka ku xigta, ku dhaji xiriirinta foomkaaga garoonka “Foom URL”. Waxaad tan ku heli kartaa adoo aado tifatiraha foomka Google oo gujinaya ‘Fayl’> “Foom dir.”
Ka dib markaad dhejiso xiriirinta, dhagsii batoonka ‘Daabac’. Таасі ваа! Адді URL-адреса сак-а-ла-галія, foomkaagu hadda waa diyaar oo loo adeegsan karo furaha. Tan waxaa lagu marin karaa ‘tagitaanka Google’ ‘Foomamka Google’> “Foomamka Google.”
Waxaa haboon in la ogaado in wpGForm yahay plugin leh curve waxbarasho. Isticmaalidda goobaha caadiga ах, foomkaagu wuxuu isticmaali doonaa waxyaabaha asasasga ah ee asaasiga ах marka laga reebo isticmaalka koodh daboolan.
Laakiin gacmaha midig, Google Forms iyo wpGForm waa isku-dhaf adag oo qaadi kara dadaalkaaga uruurinta xogta ilaa heerka xiga. Waxaad qeexi kartaa xeerarka CSS, ansixinta aqbaarta, dejinta beeraha qarsoodi ах, iyo ka saari qoraalka caadiga ах ee ku jira badhanka Google.
Si aad u ogaato wax badan oo ku ku saabsan waxyaabaha aad ku sameyn karto wpGForm, waxaad tixraaci kartaa qaybta talooyinka iyo tabaha loo yaqaan ‘сайт творця’-.
Ма ку рааксан тахай у фоамамку ягай кайб мухіім ах ехібрадда користувач WordPress? Хадді ай sidaas tahay, iska hubi boostadan si aad u heshid faa iido dheeraad ah oo ku haboon waxaad isticmaali kartaa.
« Доменний домен-манікюни: Кіфський Тікстрі Іменний домен 15 Hanyoyi masu amfani don Ingantawa, Ingantawa & Samun Traarin zirga-zirga zuwa Blog ɗinku Yau »
Sida loo qaabeeyo Foom Google a ee WordPress
Hel raadinta ugu wanaagsan ee Emailka & Baro sida loo qaabeeyo Email Doanh nghiệp của bạn
Pomoč e-pošti in Baro sida loo qaabeeyo Pošljite e-poštno podjetje
Şirketinize e-posta gönder E-postaka & Baro sida loo qaabeeyo
Sidee loogu daraa Taariikhda Google ee Trang web-ka WordPress